Baarlamanka Puntland oo Ogolaaday in dib loo dhigo waqtiga magacaabista golaha wasiirada. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Baarlamanka Puntland oo Ogolaaday in dib loo dhigo waqtiga magacaabista golaha wasiirada.
January 22, 2019 - By: Mohamud Nadif
Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta 22 January 2019 horgeeyey Golaha Wakiillada Dowladda Puntland codsi mudo kororsi ah oo ku saabsan magacaabidda Golaha Xukuumadda Puntland, mudada uu Madaxweynuhu ka codsaday Golaha Wakiillada Puntland ayaa dhammayd 14 cisho.
Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa Golaha Wakiillada Puntland uga mahadceliyey kalsoonida ay ku doorteen 08 January 2019, isla markaana ay u garteen inuu noqdo Madaxweynaha Puntland ee shanta sano ee soo socota.
“Waxaa sharaf weyn ii ah inaan hor imaado golaha oo ku jira kalfadhigiisa caadiga ah ee maalmeed, sidaad la socotaan waxaa kalsoonidii aan ku shaqayn lahaa isiiseen 08 January 2019 oo idoorateen inaan shanta sano ee soo socota noqdo Madaxweynaha Dowladda Puntland aad iyo aad Ayaan idiinka mahadcelinayaa” Ayuu yiri Madaxweynaha Puntland.
Sidoo kale Madaxweynaha Puntland ayaa Golaha Wakiillada Puntland ka codsaday muddo kororsi ku aadan magacaabidda Golaha Xukuumadda Puntland, waxaa uu Madaxweynuhu ka hor akhriyey codsigaasi mudanayaasha Golaha Xukuumadda Puntland.
“Sida uu dhigayo Dastuurka dowladda Puntland qodobkiisa 80-aad farqadiisa 4-aad, qodobka 64-aad farqadiisa 16-aad, markaan la tashaday Madaxweyne Ku-xigeenka Dowladda Puntland waxaa nala haboonaatey inaan waydiisano Golaha Wakiillada Dowladda Puntland mudo kordhin 14 maalmood ah oo ka bilaabmaysa 28 January 2019” Ayuu yiri Madaxweynaha Dowladda Puntland
Ugu danbeyn, Golaha Wakiillada Dowladda Puntland ayaa cod aqlabiyad ah ku aqbalay codsiga Madaxweynaha Dowladda Puntland ku dalbaday muddo kordhin loogu sameeyo, wakhtiga laga rabo inuu soo dhiso Xukuumadda cusub ee Dowladda Puntland, 45 xildhibaan ayaa u codeeyey oo aqbalay codsiga Madaxweynaha Puntland.